Linux OS အကြောင်း (မြန်မာ)
ကဲဒါလေးကတော့ Operation system များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Linux OS ပါ . Linux OS ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ် ဆိုတာကို ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ .. စိတ်ဝင်စားသူများ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ .
Download ifile.it ၊ Download mediaifre ၊ Download rapidshare ၊ Download 4shared ၊ Download megaupload